अदालत जाँदैछन् दीपेन्द्र ~ The Nepal Romania
आफ्नो नीजि जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने खालको समाचार प्रसारण गरेको भन्दै निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल एक वेभसाइटविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न अदालत जाँदैछन् । एक अनलाइन संस्करणले साताअघि अभिनेत्री अनु शाह र दीपेन्द्रबीचको कथित सम्बन्धबारे समाचार प्रसारण गरेको थियो । 'उक्त साइटविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दैछु' दीपेन्द्रले मेरोसिनेमासँग भने 'भ्रामक, कपोलकल्पित र नीजि जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने खालको समाचार जसमा सत्यता छैन ।' सम्बन्धलाई पुष्टि गर्न दीपेन्द्र उक्त पोर्टललाई चुनौति पनि दिएका छन् ।
विहिबारसम्म संचालकले उक्त साइटमा खण्डन नगरे मुद्दा दर्ता गर्ने बताए उनले । संचालक धर्मराज भुषालले समाचार लेख्ने कर्मचारीको खोजी गर्ने जवाफ दीपेन्द्रलाई दिएका छन् । 'बेलुकासम्म सच्याएको पाइँन भने मुद्दा लड्ने तयारीमा छु' -खनालले भने । 'दुइवटा फिल्म रेगुलर खेलाएँ भन्दैमा के मैले पाप गरेँ ?' दीपेन्द्रले भने 'राजेश हमाललाई पनि लगातार दुइवटा फिल्म खेलाएको हुँ । समाचारमा के लेखियो भन्दा पनि नियत के हो प्रमुख कुरा हो । उक्त साइटले सबैको नीजि जीवनको आयाम र परिधि बुझ्नुपर्छ ।'दीपेन्द्रले आफ्नो पहिलो प्रोजेक्ट 'द युगदेखि युगसम्म'मा अनुलाई ब्रेक दिएका थिए । जारी प्रोजेक्ट 'धर्मा'मा पनि अनुको अभिनय छ । मेरोसिनेमाको प्रतिक्रीयामा अनुले पनि समाचारमा सत्यता नरहेको बताइन् । 'हामीबीच राम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध छ' अनुले भनिन् 'जे लेखियो उक्त समाचारमा सत्यता छैन ।' दीपेन्द्र निर्देशित 'धर्मा' अहिले पूर्वका थिएटरमा प्रदर्शन भैरहेको छ ।